Qasrigii Ilaahay! | Doodwadaag waa Danwadaag.
Dhismayaasha noo dhow oo idil, isaga ayaa ugu muuq qurxoon. Muraayado ayaa dariishadihiisa ku qafilan. Deyrka dhexe ilaa derbiyada bannaanka hore, waxaa ku taxan layrar yar yar oo uu mid weliba If gaara bixinayo. Habeenkii haddaad xaafadda ka yara dheeraato, oo aad dhismayaasheeda meel dheer kasoo qooraansato, dhaayahaagu waxa ugu horreeya oo ay qabanayaan, waa gabal yaroo sidii dheemankii dhuxul madaw ka dhex birqaya. Gudihiisa haddaad gasho, gidaarrada iyo gogosha dhulka taalba, waxaa ku fidsan farashaxan qurxoon oo aysan indhuhu ka daalayn, waxaad kala xishoonaysaa inaad cagaha kula dul socotid xasiigaydiisa.
Ayeeyadeey Canab mar aan waydiiyay, sababta uu dhisamahani uga qurux badan yahay gurigayaga iyo guryaha kaleba, waxay ii sheegtay, in uu Qasrigii Ilaahay yahay.
“Ayeeyo macallinka Dugsigu wuxuu noo sheegaa in uu Alle Carshiga sare joogo oo fadhigiisu cirka yahay! Alle ma halakan buu degan yahay?” Su’aashaas ayaan ayeeyo ku ceshay, aniga oo la yaabban jawaabta ay isiisay ayeeyaday. Si deggan ayay mar labaad iigu jawaabtay oo waxay tiri “Waa run ayeeyo macallinku waxa uu idiin sheegay. Qasrigaan adoomadiisa ayaa ku caabuda ee isagu ma degana.”
Mararka qaar magac kalaa loogu yeeraa. Waxaan maqlaa Ayeeya oo gabalku markuu dhaco walaalahay Cali iyo Ciidle ku canaananaysa “Waryaada, ordaya Masjidka casharka kusoo akhrista, Faynuusyada mid gurigaa lagu hagaajinayaa, midna caruurtaa lagu cashay-siinayaa.”
Waaberigu markuu dillaaco, Jimcaale ayaa intii hurdada laga jafo, jirigaanno faaruq ah loo dhiibaa. Si uu ceelka Masjidka biyo uga soo dhaamiyo. Gurya badan oo xaafadda ku yaal ayaanu arrinkaa ka wada simannahay, oo noloshayadu waxay ku tiirsan tahay Masjidkaas. Adeegyo badan oo xaafadda ku yar, amaba aysan lahayn ayuu isagu leeyahay. Gelin hore iyo gelin danbeba, isaga ayaanu garabsannaa. Kuwa dhowr ah oo magaca guud ee (Masjid) la wadaaga, balse muuq ahaan ka midab duwan, magacya kaloo gaarana ku magacaaban ayaa iyana xaafaddeenna iyo magaaladoo idil ka dhisan. Qaar baa Quful weyni xilli walba ku qataaran yahay, Qaarna qolooyin gaar ahoo isku qaaba ayaa xilliyada Salaadda ku qulqula.
Aan usoo laabto kii annaga noo dhowaa. iyo noloshayadii ku lammaanayd Qasrigaas.
Jimcaale oo xanaaqsan, jirigaamadii Faaruqa ahaana isku jejebinaya ayaa saakay nagu soo laabtay. “Ayeeyo, anigu sow xalay idiinma sheegin. Been baad iiga malaynayseen. Maamul cusub ayaa Masjidka loo dhiibay. Shalay salaadii Casar illaa cishaa’igii ka dib, ayay dadka u sheegayeen inaan Masjidka biyo danbe laga dhaansan doonin, habeenkiina aysan cidina waxba ku akhrisanaynin oo Salaadda markii lagu tukadoba la xiri doono.” Jimcaale Illinka markuu kaoo galayba, ayeeyo ayuu ereyadaas si kulul ugu yiri.
Labadaas go’aanba annaga dan nooguma jirto. Mid weliba noloshayada culays ayuu dhankiisa ka saaray. Biyahaan cabaynay oon cunnada ku samaysanaynay ayuu midi cariiri geshay, midna casharkii walaalahay iyo cilmigay quudanayeen ayuu culays ka dhigay. Waa aduunyo iyo xaalkeed. Ayeeyo Canab aad bay mar walba u amaani jirtay una jeclayd Masjidka iyo cidda maamulka u haysa. Maantayse ciilku wejigeeda ayuu liidliidmo cusub ka jeexay. Habraha ayeeyo u yimaada iyo hooyooyinka nasoo booqdaba, waxay hadal hayaan mugdiga iyo nolosha adagee xaafadda kasoo muuqatay. Reerayawga deriska ah iyo annaguba awood uma lihin inaanu koronto noo gaara gashanno guryahayaga. Biyaha se, Baraag yaroo toban Fuusto qaadda ayaa annaga iyo dhowr qoys oo kale naga dhaxaysa, marka ay faaruqdona, bilk u dhowaad ayay qaadata in lagu soo shubo.
Weli indhahayga ma aanan saarin ayeeyo oo fekeraysa, dhafoorradana haysa. Habeenkii markay na seexinayso sheekooyin qurxoon iyo heeso macaan ayay nagu gama’siin jirtay. Caawase waa tan iyadoo yaabban na dhinac yururta. Qaylo iyo qosol la’aan ayay nagu seexinaysaa. Gacanteedii naxariista badnayd ee markay dabo illaa dacal kaa mariso ku dejin jirtay, caawa culayskeeda, “Yaa mar kaa kor qaada.” ayaad is-oranaysaa. Maalinkay hooyo dhimatay, murugo aan ayeeyo wejigeeda kasoo muuqan ayaa caawa ka muuqata.
Madaxa intaan kor usoo qaaday ayaan ayeyo waydiiyay “Ayeeyo, sow ilaahay Deeqsi Naxariis badan maahayn!? Muxuu noogu diidayaa inaan Qasrigiisa Biyo ka dhaansanno.”
Iyadoo xanaaqsan bay igu sii qaylisay “Uss waryaa. Naga aamuus oo naga seexo.”
Walashey Deeqo oo da’ahaan hal sano iga wayn, ayaa iyana dhinaca kale ka gunuunucday “Walluusan kani gurigii ilaahay ahayn, waa guri Shaydaan.” Deeqo hadalka markay intaas marinaysay, ayaa ayeeyo dhinaca kale kaga soo haadday oo dharbaaxsho dhabarka kaga dhufatay “Naa naga aamu. Ceeb. Waxaas mar danbe haku hadlin.”
Deeqo iyada oo sii gunuunucaysa, ayay tiri “Waaxaa igu ballan ah, Alle markaan la kulmo, in aan u sheegi doono, In Gurigiisa lana ku bahdilay oo lana ku guumaystay.”
Habeenkaas waxaan seexday aniga oo ay maskaxdayda ka guuxayso Deeqo iyo ereyadii ay ku gunuunucaysay. Waxaan laftarkaygu jeclaystay inaan Alle la kulmo si aan ugu dacweeyo kuwa biyihiisa nagu canaaday. Indhaha haddaanu is gelinnay oonu gama’nay. Waxaa aniga lay dhex-geeyay dhul aanan weligay arag. Habeennadii hore waxaan ku riyoon jiray Dugaag iyo Dadqalato. Caawa se deegaan aan weligay riyo ku arag ayaa lay dhex-qaadsiiyay. Cod maqalkiisii uu dhegahayga ilaa iyo hadda kasii dhamaan la’yahay, ayaa riyo laygu maqashiiyay. “Adoonkaygiiyoow. Marka hore dhul iyo cirba waxa ka dhisan iyo wax la dhisi doonoba, aniga ayaa iska leh. Masaajidka oo keliya gurigayga gaarka maahan, ee meel walboo adoomadaydu magan bidaan waa gurigayga. Adoonkaygiiyow iska dhaaf in goobaha laygu caabudo laydin ku ciilo e, waxaaba Khalad ah idinka oo baraagihiinnu faaruq yihiin in kuwa Masaajiddadu buux-dhaaf sanyihiin oo ay bannaanada isaga qubanayaan. Masjidka idiin dhow ee aad biyaha ka dhaansan jirteen, haddii ay boqolaal qofi Salaad iyo cibaada usoo galaan, waxaa igala qiima badan dhowrkiinna reerood ee caawinaadda ka hela ceelkiisa. Adoonkaygow, Cibaadadaydu maahan in aniga lay tukado, loona maleeyo Tallaabooyin Masjid loosoo qaado oo keliya in Ajar laga helo. Adoonkaygow ogow. Tallaabo walba oo uu qof walboo idinka mid ahi ceelka Masjidka usoo qaado, iyada oo wanaag ah, ayaa malaa’igtaydu u tirisaa ruuxii Masjidkaa taagay. Adoomadayda oo is-caawiya, noolahaygoo isu naxariista, waxay ka mid yihiin cibaadooyinka ugu qurxoon ee aadanuhu la yimaado.
Adoonkaygow, waan la xisaabtami doonaa cid walboo Gefkaas geysatay oo guryihiinnoo mugdi la madaw, Masjidyada iftiin ku dhalaaliyay.”
Habeen dheer iyo hurdo badan ka dib. Farxad iyo firfircooni dheeraad ah ayaan subixii lasoo kacay. Weli waxay dhegahaygu ku macaansanayaan codkii iyo farriimihii qurxoonaa ee xalay oo idil lay akhrinayay. Sidaa haddaan usoo kacayba, Jimcaale iyo ayeeyo Canab ayaan Riyadii la wadaagay. “Ayeeyo ilaahay baan xalay riyo ku maqlay!” Ciwaankaas ayaan sheekadayda hor-dhac uga dhigay, oo farriimihii faraha kaga bixiyay ayeeyo iyo Jimcaale. Gooraan meel dhexe hadalka marsiinayo, ayaa sheekada laygu soo xiray oo lay yiri. “Aar naga aamu, Farriimahaaga maahanee, Shaydaan baa xaloo dhan kula faqayay, Sharkiisii iyo inuu Masaajidda ku nacsiiyo ayuu rabaa. Wax la dhiso oo Masjid la qiima ah ama ka qiima badan maba jiro.” Waa layga kacay oo labada dhinac layga kala dhaqaaqay. Intaan yara ciishooday ayaan ku iri. “Haddii uu Shaydaan sidaas yahay, Ilaaha aad ka sheekaysaan, shaydaankaas aan xalay arkay ayaa ka fiican. Xaashaa lilaahiyee. Waan se hubaa inuu Alle ka wayn yahay kana sarreeyo midka maankiinna ku jira ee mala-awaalkiinnu mar walba suuraysto.”
Cabdiataax Daahir Cilmi